I-Porn ingaba umlutha wokuziphatha | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Impilo Umlutha Wokuziphatha
Ucwaningo lwamuva lubonise lokho ukuziphatha hhayi nje izinto kungaba umlutha futhi. Kungabangela ukuthi isimo esifanayo sishintshe ohlelweni lomvuzo lobuchopho ukuthi i-cocaine noma utshwala noma i-nicotine izidakamizwa zikhiqiza. (Bona ngezansi). Lezi ziphathamandla zifaka ukugembula, imidlalo ye-intanethi, kanye nemidiya yezenhlalo njenge-Facebook futhi cishe izinhlelo zokusebenza zokuthandana ezifana ne-Tinder noma i-Grindr.
Nansi a iphepha ngososayensi abahamba phambili emhlabeni abachaza ukuthi kungani izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kufanele zibhekwe njengesiyaluyalu sokulutha. Ibhalwe ngokubambisana ngabaphenyi abaningi emkhakheni wokuziphatha okuyinkinga kwezocansi. Ibuza ukuthi ngabe ukuxilongwa okusha kwe-CSBD kungokwesigaba se- "Impulse Control Disorder", lapho ihlala khona njengamanje. Ababhali basikisela ukuthi ukwesekwa okukholisa kunazo zonke, okukhona nge-CSB 'njengesifo sokulutha.'
Lokhu kuyifushane, i-zippy izithombe ezinganeni mayelana umlutha wezocansi. Lokhu yi izithombe ezinde lokho kuchaza ngempela izinto eziyisisekelo.
Eziningi zalezi zinkinga ziyiyona 'inguquko enkulu' yemiphumela yemvelo noma iziqinisi zemvelo zokudla, ukubopha, nokucansana. Ukudla okungenamsoco namazinga akhe aphezulu kasawoti, ushukela namafutha 'ukudla okungavamile' ngokulingana nomvuzo ophezulu wekhalori abanikeza ubuchopho buguquke ngenxa yokuntuleka; imidiya yezenhlalakahle ifana ne-version exaggerated of bonding, amakhulu 'abangane' ngokuchofoza; kanye ne-porn ye-intanethi ne-parade yayo engapheli yokuzikhethela 'izingane ezishisayo' inguqulo engavamile kakhulu yobulili.
Ngezidakamizwa, abasebenzisi badinga isilinganiso esiphezulu ukuze bathole okufanayo 'hit'. Nge-intanethi, abasebenzisi abangaphezu kwesikhathi badinga intsha eyengeziwe noma amandla amaningi ukuze bazizwe nomphumela ofanayo. Imbonini yezocansi ijabule kakhulu ukunikeza lokhu.
Njengoba izinga le-dopamine liphuma ngokulindela 'umvuzo,' liphinde liwe ngokushesha ngemuva kokuba umvuzo utholakele. Abasebenzisi kudingeka baqhubeke bechofoza ukwaziswa kwendabuko ukugcina imivuzo iza. Uma siqhubeka sicindezela ubuchopho ukuba senze njalo, sigcizelela uhlelo futhi sigweme ukukhiqiza njengendlela yokuvikelwa. Uma siqhubeka nokuzitika ngokweqile, ubuchopho bunquma ukuthi lokhu kufanele kube yizimo eziphuthumayo zokufeza izinhloso futhi kuphephe ukukhathala kwayo ('kunokwanele'). Futhi, amazinga aphezulu e-dopamine aqala ukukhululwa kweprotheyini ebizwa ngokuthi i-Delta Fos B. Lokhu kwakha ohlelweni lwethu lomvuzo okubuyiselwa ebuchosheni ukusisiza sigxile, sikhumbule futhi uphinde lo mvuzo obalulekile.
Izici ezine manje zihlotshaniswa nezinguquko ezingokwenyama ekusebenzeni kobuchopho njengomphumela wenqubo yokulutha. Lezi izi:
• Ukwehlisa izinzwa
• Indlela yokulawula umfutho - Ukuzenzisa
• Izijikelezo ezingasebenzi ezingasebenzi
'Ukuhlaselwa' kuyinto impendulo encane enjabulweni, ikakhulukazi emivuzo yemvelo, njengokudla noma ukubopha nabanye. Ngokuvamile ubuchopho obuhlobene nomlutha bushintsha isaziso sabasebenzisi be-porn. Zizizwa zicindezelekile, ziboshiwe, ziyizicabha futhi zingenalutho. Ukuguqulwa kwe-dopamine nokunciphisa ezinye izinguquko kushiya umsebenzisi osindayo ongacabangi kakhulu kuzo zonke izinjabulo zansuku zonke futhi 'elambile' imisebenzi yokukhulisa i-dopamine nezinto. Badinga ukugqugquzela okukhulu nokukhudlwana ukuthola i-buzz. Bangase bachithe isikhathi esengeziwe ku-intanethi, bavuselele amaseshingi ngokuhlela, bebuka lapho bengenayo i-masturbating, noma befuna ividiyo ephelele ukuphela nayo. Kodwa ukuchithwa kwamandla kungathatha uhlobo lokukhula ezinhlotsheni ezintsha, ngezinye izikhathi ezikhuni, ezingahambi, ngisho nokuphazamisa. Khumbula: ukushaqeka, ukumangala nokukhathazeka kuveza i-adrenaline ukufaka i-dopamine nokwandisa ukuvusa ucansi.
Ngokuphambene nalokho, okuwukuphela kwento esinaka futhi ivuse imimoya yethu into esiyithandayo, isimilo sokulutha noma into esiyithandayo. Lokhu kungenxa yokuthi 'sesiyikhathalele' kakhulu. Ukuzwela kubangela izifiso ezinamandla noma inkumbulo enkulu yokuzijabulisa, 'inkumbulo euphoric', lapho yenziwe yasebenza. Isixhumanisi sokukhumbula inkumbulo ubuchopho 'obuxhuma ndawonye, ​​bushe ndawonye' inqubo isebenza. Le nkumbulo enesimo sePavlovian yenza ukuba umlutha uphoqe kakhulu kunanoma yimuphi omunye umsebenzi empilweni yomlutha.
Ukuxhumeka kwe-nerve rewired kwenza uhlelo lokuvuza luvuke ekuphenduleni imiqondo noma imicabango ephathelene nokulutha umlutha. I-Cocaine umlutha angase abone ushukela futhi acabange nge-cocaine. Umuntu ophuza utshwala uzwa ukugcoba kwezibuko noma uphuze ubhiya lapho edlula ishicilelo futhi ngokushesha ufuna ukungena.
Ngomlutha we-inthanethi we-intanethi, izinkulumo ezifana nokuvula ikhompyutha, ukubona i-pop up, noma ukuhlala ekhaya yedwa, kubangela ukulangazelela okukhulu kwe-porn. Ingabe umfana ngokuzumayo ama-hornier amaningi (i-libido yeqiniso) lapho umkakhe, umama noma u-flatmate behamba bethenga? Akunakwenzeka. Kodwa mhlawumbe uzizwa sengathi uhamba nge-autopilot, noma omunye umuntu ulawula ubuchopho bakhe. Abanye bachaza impendulo ye-porn ezwelayo ngokuthi 'ukungena emhubheni onokuphunyuka okulodwa: i-porn'. Mhlawumbe uzizwa esheshayo, ukushaya kwenhliziyo ngokushesha, ngisho nokuthuthumela, futhi konke angacabanga ngakho kungena kwi-website yakhe ethandwa yi-porn. Lezi yizibonelo zemigwaqo yokulutha okukhuthazwayo eyenza uhlelo lokuvuza, ukukhamuluka, "kwenze manje!" Ngisho noma ingozi yokwenza icala lobulili ngeke iqede.
Ukuziphatha ngokweqile, noma ukunciphisa umsebenzi wezobuchopho ezifundeni ze-prefrontal, kubuthakatha amandla noma ukuzithiba, lapho ubhekene nezifiso eziqinile ezingathandeki. Lokhu kwenzeka njengomphumela we-shrinkage wezindaba ezimpunga nemininingwane emhlophe, ezindaweni eziphambili. Le yingxenye yobuchopho esisiza ukuthi sibeke ama-brakes ekukhethweni okungalungile empilweni yethu yesikhathi eside. Kusisiza ukuthi sithi 'cha' kithi uma sizizwa silingo. Ngalesi sakhiwo sesiphelile, sinamandla okwehluleka ukubikezela imiphumela. Kungase kuzwe njengokungathi kukhona impi. Izindlela ezizwakalayo zimemeza 'Yebo!' kuyilapho ubuchopho obuphakeme bethi 'Cha! Ngeke futhi!' Njengoba izingxenye zokulawula eziphezulu zengqondo ebucayi, indlela yokulutha izidakamizwa ivame ukunqoba.
Izinsana zitholakala kalula ekubhekaneni nokulutha. Akugcini nje ukuthi bane-dopamine engaphezulu ababagxilisa ukuba bathathe izingozi (i-pedelerator pedal is depressed ngokugcwele), kodwa i-lobes yangaphambili ayizange ikhule ngokugcwele, (ama-brakes ayisebenzi kahle kakhulu).
Izijikelezo ezingasebenzi ezingasebenzi. Lokhu kwenza ngisho nokucindezeleka okuncane kuholele ekuthandeni futhi kubuyeke ngenxa yokuthi kusebenze izindlela ezinamandla ezizwakalayo.
Lezi zenzakalo ziyisisekelo sezo zonke izidakamizwa. Omunye ophulukisa umlutha wezithombe zobulili ezingcolile wabamemezela: 'Angisoze ngathola okwanele kwalokho okungangigculisi futhi akukaze, kunganelise nanini'.
Ukuhoxa. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukulutha njalo kubandakanya konke ukubekezelelana (isidingo sokuvuselela okwengeziwe ukuthola umphumela ofanayo, obangelwa ukungafuneki kwesifo) kanye nezimpawu zokuhoxa ezinesihluku. Eqinisweni, futhi akuyona imfuneko yokulutha umlutha - yize abasebenzisi be-porn banamuhla bavame ukubika bobabili. Yikuphi konke ukuhlolwa kokuhlolwa komlutha okwabiwayo,Ukusetshenziswa okuqhubekayo naphezu kwemiphumela emibi'. Lokho ubufakazi obunokwethenjelwa kakhulu bokulutha umlutha.
Uma ungathanda ulwazi oluthe xaxa ocwaningweni ekubekezeleni nasekukhuphukeni, chofoza lapha (isayithi langaphandle, livula ewindini elisha).
<< Umlutha Ukubuyiselwa >>